[solved]dual boot မှာ vista ပြန်မတက်လာတော့လို့ပါ။ [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Window Problems » [solved]dual boot မှာ vista ပြန်မတက်လာတော့လို့ပါ။ [Problem]
1 [solved]dual boot မှာ vista ပြန်မတက်လာတော့လို့ပါ။ [Problem] on 10th November 2009, 9:20 pm
[You must be registered and logged in to see this image.] ကျွန်တော်စက်မှာ windows xp နဲ့ windows vista တင်ထားပါတယ်။
windows xp ကိုဖြုတ်ပြီးပြန်တင်တာ vista မတက်လာတော့ဘူး။
ဘယ်လို့လုပ်ရမလည်းခင်ဗျာ ကူညီကြပါဦး။ ခုတော့ဒီတိုင်းလေးဘဲထားထားတယ်။ [You must be registered and logged in to see this image.]
2 Re: [solved]dual boot မှာ vista ပြန်မတက်လာတော့လို့ပါ။ [Problem] on 11th November 2009, 7:20 am
အရင်ဆုံး ကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲမှာ Window XP ရော Window Vista ရောကို dual boot အသုံးပြုနေတာ အဆင်ပြေတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်က XP ကိုဖြုတ်ပြီး ပြန်တင်တာ Vista ပြန်မတက်လာတော့ဘူး။
ဒါက dual boot သမားတွေ အမြဲလိုလိုဖြစ်နေတတ်တဲ့ ပြဿနာတစ်ခုပါ။ အသေးစိတ်ကိုတော့ အောက်ပါ link မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ခုသိထားရမှာကတော့ ဘယ်တော့မဆို Microsoft Window တွေဟာ dual boot လုပ်မယ်ဆိုရင် အရင်ထွက်တဲ့ OS version တွေကနေ Latest OS version တွေကို update လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဥပမာ XP တင်ပြီးမှ Vista တင်၊ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း Server 2000 တင်ပြီးမှ Vista တင်ပြီး dual boot လုပ်ပေါ့။ အဲဒါဆိုရင် ကိုယ် dual boot လုပ်တဲ့ OS နှစ်ခုစလုံးကို အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Latest ကနေ Older Version တွေကိုသွားပြီး dual boot လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ Vista တင်ပြီးသားကို XP ပြန်တင်တာမျိုးတွေပေါ့။ အဲဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ ကိုယ် dual boot လုပ်ထားတဲ့ OS နှစ်ခုစလုံး အသုံးမပြုနိုင်တဲ့ အခြေအနေထိ တောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Third Party Software တွေကိုအသုံးပြုပြီး boot recorder file တွေကို save လုပ်ပြီး တင်ရင်တော့ရပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို အပေါ်မှာ ကျနော်ပေးထားတဲ့ လင့်ကနေကြည့်နိုင်ပါတယ်။
3 Re: [solved]dual boot မှာ vista ပြန်မတက်လာတော့လို့ပါ။ [Problem] on 16th November 2009, 9:34 pm
ညီရေအဆင်ပြေသွားပြီး။ ကျေးဇူးပါ။ manawphyulay ရေးထားတဲ့ post နဲ့အဆင်ပြေသွားတယ်။
Last edited by Fox on 10th August 2011, 7:25 pm; edited2times in total (Reason for editing : link ကို Code ဖြင့်ဖော်ပြလိုက်သည်။)
4 Re: [solved]dual boot မှာ vista ပြန်မတက်လာတော့လို့ပါ။ [Problem]